China lashukumisa lukathayela zophahla Ishidi ifektri abakhiqizi | Kubolekiswa
Izinto: SGCC, SGCH, DX51D + Z
Isitifiketi: ISO9001, SGS, SAI, BV, njll
Ukushuba ukubekezelelana: ± 0.02mm
Ukubekezelelana kobubanzi: -0 / + 3mm
Galvalume Steel zophahla Ishidi
● Ishidi lokufulela lensimbi le-galvalume lenziwe ngekhoyili yensimbi ye-galvalume futhi licutshungulwa ngomshini wokwenza umqulu.
● Ishidi elifulelwe ngophahla lwensimbi lwe-anti-fingerprint ligcwele uketshezi lokuvikela iminwe kushidi le-galvalume futhi lidlala indima ekulweni nokugqwala. Ithunyelwa ikakhulukazi emazweni aseningizimu-mpumalanga ye-Asia.
1) ukumelana ukugqwala galvalume steel ukufulela amashidi kuyinto izikhathi 3 kuya 5 ukuthi lukathayela yensimbi lashukumisa amashidi, futhi lapho ezinzima kakhulu ukugqwala, mkhulu umehluko. Ngakho-ke, ophahleni lokwakha, kufanele kukhethwe amashidi wensimbi ayigalofu AZ150.
I-2) I-AZ150 icishe ibe ngu-10-20% ebiza kakhulu kune-Z275, kepha ukumelana kwayo nokugqwala kungu-3 ~ izikhathi ezi-5.
Lukathayela Lashukumisa Zophahla lwensimbi
● Uphahla lukathayela lukathayela lwenziwe ngohlobo lwe-coil yensimbi futhi lwenziwa ngumshini wokwenza umqulu.
● Ngokuya ngokwahlukahluka kwe-galvanizing, ihlukaniswe yaba yizingcwecwe ezinkulu neziphini ezingama-zero. Ngokwendlela yokukhiqiza, ingahlukaniswa ibe yinsimbi eshubile eshisayo, i-electro-galvanized steel, kanye ne-alloy-galvanized steel.
● Amakhasimende ase-Afrika athenga ikakhulukazi ubude obungu-0,13 * 665, anezipanela ezingama-zero ezifulelwe ngothayela.
● Phakathi kwabo, ikakhulukazi sidayisa amashidi wensimbi ashubile ashubile ngoba ukukhiqizwa kwamashidi wensimbi kagesi kuzongcolisa imvelo.
● I-logo ingenziwa ngezifiso ebusweni kukathayela wensimbi oshubile ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ukufulelwa kukathayela ngothayela kunesisindo esinamacala amabili sokumboza esingu-20-700 g / m2 ngokusho kokuhlolwa kwe-ASTM. Amashidi wensimbi asetshenzisiwe asetshenziswa kakhulu asetshenziselwa ukwakhiwa yi-Z275 ne-Z450, kanti inani le-galvanizing ngu-275 g / m2 (ubukhulu obuncane bohlangothini olulodwa lweshidi lensimbi ngu-19 μm) no-450g / m2.
Igama lomkhiqizo Lashukumisa Steel zophahla Ishidi
Izinto I-SGCC, SGCH, DX51D + Z
Isitifiketi ISO9001, SGS, SAI, BV, njll
Ubukhulu 0.12mm-1.2mm, Ubukhulu ukubekezelelana: ± 0.02mm
Ububanzi 600mm-1250mm, Ububanzi ukubekezelelana: -0 / + 3mm
Isisindo Pallet ngalinye 3-5tons noma njengoba imfuneko yekhasimende
Zinc esinemthombo 30-275gsm
Ubuso I-spangle ejwayelekile, i-RAL ipendiwe
Isikhathi sokuphila 10-30years noma 30-50years
Amandla wokunikezela 8000tons ngesonto
Isicelo Ukwakhiwa, ukuqhuma, indawo yokusebenza nokunye
MOQ 25 amathani
Imigomo yokukhokha L / C, T / T, Imali, Alibaba.com Trade Assurance
Isikhathi sokuthumela Isikhathi sokukhiqiza zingakapheli izinsuku eziyi-7 - 20 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda
Ukuhlolwa Isitifiketi sokuhlolwa kwaseFekthri sizokhishwa ngakho konke ukuthunyelwa.
Ukuhlolwa komuntu wesithathu kuyamukelwa.
Langaphambilini Umbala Lukathayela Roof Ishidi
Olandelayo: Amapayipi wensimbi